Tax Season isiZulu
SARS Home > Types of Tax > Personal Income Tax > Tax Season > Tax Season isiZulu
UMZULISWANO WENTELA KA-2017 WABANTU NGABODWANA
Umzuliswano Wentela ka-2017 uyavula mhla ka-1 kuNtulikazi 2017.
Abasebenzisi be-eFiling bazokuba ngabokuqala ojengeni futhi bangafaka izinto zabo kusukela mhlaka 1 kuNtulikazi bese kuthi amagatsha ethu kanye nezikhungo zezingcingo azovulela ukukusiza kusekala mhlaka 3 kuNtulikazi 2017
Izinsuku zeminqamlajuqu zimi kanje:
​Siqu – ngeposi noma ebhokisini egatsheni lakwa-SARS
​22 kuMandulo 2017 ​Abesithutshana Nabamileyo
Nge-eFiling noma bugesi egatsheni lakwa-SARS ​
​24 kuLwezi 2017 ​Abamileyo
​31 kuMasingana 2018 ​Abesithutshana
Yini entsha? 14 kuNtulikazi 2017 – Ukushiywa kwekhodi yomthombomali u-4582
Lokhu kwethulwe izidingo Zenguqula Mhlalaphansi (Retirement Reform), ikhodi yemininingwane 4582 (ingxenye yokuholela yengenisomali ibandakanywe ngaphansi kwekhodi yengenisomali:3701 Isabelomali Yokuhambela, u-3702 Imalisabelo Yokuhambela, 3802/3816 Ukusetshenziswa kweSithuthi Esihlinzekwe nguMqashi) kanye nenanibungako kushiywe ngaphandle efayelini lokuleha elenziwe nge- e@syFile™ Employer. Nakhu okufanele kwenziwe ngabaQashi kanye nabaSebenzi, cindezela lapha.
Amasu Okugcwalisa imbuyiselo yakho
Thola igama lakho lokungena kwi-eFiling bese ufaka kabusha igamamfihlo lakho uma ubusulikhohliwe.
Qiniseka ukuba imininingwane ngawe evela kwimbuyiselo yentela ihambisana neyamanje.
Yonke imininingwane yasebhange iqonde kahle.
Beka eduze wonke amaphepha ayisidingo nafakazayo:
Ubufakazi bengenisomali njengalobu:
I-IRP5/IT3(a) evela kumqashi wakho noma esikhwameni sempesheni
Izitifiketi zentela zengenisomali lotshalomali i-IT3(b)
Izitifiketi Zotshalomali Olungatheli i-IT3(s)
Izitatimende Zezezimali (isib ezengenisomali lebhizinisi), njll.
Ubufakazi bokubanjelwa njengalobu:
Amaresidi nezitifiketi zezinkokhelo zesikhwama sezempilo
Ifomu lokuqinisekisa ukuphila nokukhubazeka eligcwalisiwe (ITR-DD) uma ufakela izindleko zokukhubazeka isicelo
Izitifiketi zezinkokhelo zesikhwama somhlalaphansi
Ilogbook yezinkambo (uma uthola imalisabelo yokuhambela kumbe usebenzisa imoto yenkampani), njll.
Isungqangi: Phatha Umazisi wakho, iphasiphothi kumbe ilayisense yokushayela uma uza egatsheni ulethe imbuyiselo yakho.
Qiniseka ukuthi izimbuyiselo zentela zaminyaka edlule noma zenye intela zilethiwe.
Uma ungenasiqiniseko noma kumele yini ufake imbuyiselo yentela kuMzuliswano Wentela ka-2017, cindezela lapha.
Izinguquko ezezenziwe kwiMbuyiselo Yentela i-ITR12
Kulo Mzuliswano Wentela ka-2017 sethula lezi zinguquko ezilandelayo zembuyiselo yentela i-ITR12:
Bhka ukuthi imininingwane evela esitifiketini sakho sentela sesikhwama sezempilo ihamba kahle. Uma kungenjalo, thintana nabesikhwama sakho sezempilo andukuba ulethe imbuyiselo yentela. Uma izinkokhelo zesikhwama sezempilo uzikhokhelwa ngumqashi wakho, inani lazo lizovela esitifiketini sakho i-IRP5/IT3(a) kepha u-SARS angeke asibale lesi samba uma ebala imbuyekezo yakho.Kufanele ugcwalise isigaba sezindleko zezempiloku-ITR12 usebenzise imininingwane esesitifiketini sentela sesikhwama sezempilo. Ngolunye ulwazi ngezinguquko ezindlekweni zezempilo, bheka Izindleko Zezempilo.
Izinkokhelo Zesikhwama Somhlalaphansi
Uma ukufakela izinkokhelo ozenzile zesikhwama somhlalaphansi isicelo sokubanjelwa, kufanele uhlinzeke ngezinombolo zamapholisi kanye namagama emishwalense kumbe izikhwama ngakunye.
Ingenisomali elabiwe/eligunyazwe njengomhlomuli wamaQomangcebo(Trusts)
Uma uthole ingenisomali njengomhlomuli weqomangcebo, imininingwane yeqomangcebo ngalinye kanjalo nemininingwane yengenisomali lakuleli nelasemazweni elitholakale kwiqomangcebo mayifakwe ngokuzimela. Ingenisomali lamaqomangcebo ehlukene malingahlanganiswa, kepha malidalulwe ezigabeni ezahlukene.
Ulwazi olungaphezulu lwalowo nalowo muntu ophila nokukhubazeka ofanelekile kudingeka kugcwalise ngaye ku-ITR12. Uma wena, owakwakho nom aumntwan ofanelekile behlonzwe njengabaphila nokukhubazeka ngumsebenzi wezempilo ogunyaziwe futhi ufuna ukufaka isicelo, kufanele uhlinzeke le mininingwane elandelayo:
Usuku lokuzalwa lwalowo ofanelekile
Ubucayi bokukhubazeka ngokwe-ITR-DD
Usuku okugcwaliswe ngalo Isitifiketi Sokuqinisekisa Ukuhlonzwa Njengokhubazekile (ITR-DD) sakamuva ngudokotela osemthethweni
Inombolo Yokugunyazwa yaleso sisebenzi sezempilo esigcwalise i-ITR-DD.
Lapho kunongaphezu koyedwa kwabaphila nokukhubazeka, makuhlinzekwe imininingwane egcwele yalowo nalowo muntu.
Isungqangi: Ungayilethi i-ITR-DD. Sizokutshela uma siyidinga.
Isimo Sobuhlali baseNingizimu Afrika
Abakhokhintela kuzofanele baveze, lapho kufanelekile, usuku onyakeni wokubuyekeza (isib. 1 kuNdasa kuya ku-28 kuNhlolanja 2017) abayeka ukuba ngabahlali beRiphabliki yaseNingizimu Afrika.
Abakhokhintela abebengasebenzi unyaka wonke wokubuyekeza (isib. 1 kuNdasa 2016 kuya ku-28 Nhlolanja 2017), futhi ongatholanga ngenisomali (kuhlanganiso inzuzo/ukuphunza kotshalomali) kudingeka akuveze lokhu kwi-ITR12. Abakhokhintelaabebengasebenzi kunoma yisiphi isthuba onyakeni wokubuyekeza kuzomele baveze lezo zithuba zokungasebenzi endaweni efanele ku-ITR12.
Uhlelo lokuqinisekiswa koMkhokhintela
Sesiqalise uhlelo lokuvikela olusha emagatsheni lwabakhokhintela abadinga ukuguqula imininingwane yabo yasebhange kumbe eminye imininingwane ebhaliswe kwa-SARS. Uzokuqinisekiswa ukuze siqiniseke ukuba imininingwane yakho iphephelie. Khumbula, abakhokhintela ababhalisiwe kwi-eFiling abangaguqula imininingwane yasebhange kanye neminye ebhalisiwe kwi-eFiling. Uma ukuqinisekiswa kwemininingwane yakho yasebhange kungaphumeleli kwi-eFiling, uzokunxuswa ukuba ughambele igatsha lakwa-SARS ukuze uqinisekise imininingwane yakho yasebhange siqu. Khumbula,imininingwane yomuntu emininingi iyaguquleka ku-eFiling, kungaphansi kwezimo ezithize kuphela lapho udinga ukuya egatsheni lakwa-SARS ukuze uguqule leyo mininingwane.
Hlinzeka ngoMazisi wakho
Sizohlonza amanyatheliso omunwe
Sizoqinisekisa le mininingwane noMnyango WezaseKhaya ukuthi ihambisana naleyo abanayo na.
Ungabi yisisulu sokuqolwa ubuzihlonzi bakho bezentela –vikela imininingwane yakho yobukhokhintela, yasebhange, igama lokungena negamamfihlo zikhathi zonke.
Qaphela abantu abacela ukukugcwalisela imbuyiselo yakho yentela bakuthembise ukuthi uzothola imali ebuyiswayo. Sebenzisa izazi zezentela ezigunyaziwe kuphela. Uma wakha amatulo nabantu abathi bazokutholela imali ebuyayo nawe unecala lokwaphula umthetho.
Isungqangi: U-SARS akasoze akucela imininingwane yasebhange ngezincwadi ezifike ngeposi, i-imeyili noma nge-SMS. U-SARS kasoze futhi akuthumela imiyalezo enamakhongco akuthumela kwamanye amawebhsayithi.
Shayela i-Contact Centre yakwa-SARS ku- 0800 00 7277
Ungalindi kujenge lwase-Contact Centre – Sebenzisa ikhethelo lika- Call-back umsebenzi wakwa-SARS uzokushayela ucingo. Leli khethelo lika- Call-Back lizonikezelwa kuwe uma ubusulinde isikhathi eside. Uzokubuzwa imibuzwana embalwa ngawe, okuhlanganisa nenombolo okufanele ishayelwe. Uma usunikezelwe kahle ikhethelo lika-Call Back, kuzobekwa eceleni inombolo yojenge lapho-ke usungabeka phansi ucingo ulinde umsebenzi wakwa-SARS onobungane akushayele. KuloMzuliswane Wentela ka-2017, uhlelo luka-Call Back lutholakala ngezikhathi zokusebenza ze-Contact Centre, ngoMsombuluko kuya kuLwesihlalu phakathi kuka-08:00 kuya ku-18:00.
Cindezela uphawu luka-Help-You-eFile bese uqoka u “Call Me”. Omunye wabasebenzi bethu uzokushayela ukuze akusize isigaba ngesigaba nge-eFiling
Ungahambela futhi izithangami zokufundisa ngentela zethu kumbe uvakashele oseduze nawe umahambanendlwane wakwa-SARS.
Uma ukhohlwe yigamamfihlo ungabuye ufake elinye ngokushayela i-Contact Centre yakwa-SARS ulandele uhlelo olulula. Bheka uhlelo lwethu olusobala lokuzisiza wena.
Isu-ngqangi: Hlala unolwazi ngokuvakashela iwebhsayithi yethu njalo, kumbe okungcono kakhulu, zibhalisele izaziso ze-RSS feeds uzokwaziswa njalo uma kunezinguquko ezenziwe ekhasini olilandelayo!
Last Updated: 01/08/2017 10:33 AM ​